GNU / Linux Vashandisi: Mutemo Wakagadzirwa, Cheat Yakagadzirwa! | Linux Vakapindwa muropa
Mazuva mashoma apfuura, isu takapindura mune iyi post nezve dzakasiyana mhando dzevashandisi maakaunzi muWindows uye sei (manejimendi anotarisira) anofanira kuve nematurusi uye kugona kudzivirira iyo system nevashandisi kubva kune vekunze uye ivo pachavo;)
Ngatizvionei izvozvi zvinogoneka vanoshandisa isu tine muhurongwa GNU / Linux:
* mudzi : ndiye mushandisi super power kana maneja, ngatitii. Iyo mudzi mushandisi ine mvumo izere pane madhairekitori uye mafaera (zvisinei kuti ndiyani anazvo), anogona kuisa uye kusunungura software, kugadzirisa nezve system yese, shandisa maakaunzi evashandisi, nezvimwe. Iwe une kutonga uye mutoro wekuti iyo system kana pc inoshanda nemazvo.
* vashandisi vakakosha (kana zvakare maakaundi sisitimuaya maakaundi, ayo anowanzo gadzirwa kana kugoverwa kwaiswa, hauna password sezvazvakagadzirwa kuitira kuti uwane mamwe maropafadzo ekuwana. mudzi kuita mamwe mabasa, asi kwete kupinda muchirongwa navo.
* vashandisiwo zvavo: aya maakaundi akajairika evashandisi, ako neni. Kana tichigadzira mushandisi mutsva, dhairekitori redu rekushanda richagadzirwa (in / imba / yedu_user). Zviripachena isu tine maropafadzo pamusoro penzvimbo yedu yebasa uye mafaera edu, atinogona kuzvishandura zvakanyanya sekuda kwedu.
Uye kana ikozvino ini, mushandisi kubva kudistro yangu, ini ndoda kuisa chimwe chinhu: ndoita sei? Ini ndinogona kusarudza kukumbira iyo system Administrator kuti iise iyo kwandiri kana ... shandisa rairo su kana zvimwe sudo.
Inotsanangurwa zvakajeka paWikipedia:
Purogiramu su chishandiso cheUnix-senge anoshanda masystem ayo Inokutendera iwe kushandisa imwe mushandisi goko usingabude kunze. Inowanzo shandiswa tora midzi mvumo yekushandisa mashandiro, usingatombofaniri kubuda uye kupinda zvakare muchirongwa. Dzimwe nharaunda dzedesktop, kusanganisira GNOME neKDE, zvine zvirongwa zvinonyatsokumbira password usati watendera mushandisi kuita rairo iyo yaizowanzoda mukana wakadai.
Izita su kunobva kuchirungu schinotsiva uwater (Chinja mushandisi). Kune vamwewo vanoita kuti zviitwe kubva superuwater (super-mushandisi, ndiko kuti, mudzi mushandisi) kubvira inowanzo shandiswa kutora chinzvimbo chehurongwa maneja.
Izvi zvinoreva kuti, kubva kune yekupedzisira koni kana kubva ku graphical interface mune dzimwe nguva, chimwe chiitiko chinogona kuitwa semushandisi mudzi. Nezve izvi, ini ndinofanira kuisa password yeakataurwa mushandisi uye, kana iri echokwadi, enderera.
Kunyangwe isu tisingazive password yemushandisi mudzi (uye izvi, mumaonero angu, ndicho chinhu chakarurama kuita) isu tine imwe sarudzo yekuisa izvo zvatinofanirwa kuisa: iwo wekuraira sudo.
Iwo murairo wakadaidzwa sudo eita rairo seumwe mushandisi, uchiremekedza nhevedzano yezvirambidzo pane izvo vashandisi vanogona kuitisa iyo mirairo pachinzvimbo chevamwe vashandisi (kazhinji inotsanangurwa mufaira / etc / sudoers). Kusiyana su, sudo inokurudzira vashandisi kune yavo nyowani pane yavo inodiwa mushandisi; izvi kubvumidza kutumirwa kwemimwe mirairo kune vamwe vashandisi pane chaiwo michina pasina kugovera mapassword, panguva imwe chete ichideredza njodzi yekusiya zviteshi zvisina kuchengetedzwa.
Tinogona kutaura ipapo kuti, kana isu tiri vashandisi vane basa rehurongwa hwedu uye isu tiri veboka majuzi, Hatifanire kunge tine matambudziko ekuzvibata isu nerunyararo rwepfungwa (ndinoreva mushandisi mushandisi, iyo account yatinogona kugadzira papc yababa vedu / amai / mukoma / sekuru / mukomana / mukomana / musikana ...) kana, kana isu ndiwe mushandisi wemidzi, uine hanya zvakanyanya.
Kuverenga zvakatenderedza ndakaona kuti zvinokurudzirwa Kazhinji edza kusa pinda mukati uye kugara uchishanda semudzi mushandisi, asi gadzira yakajairika mushandisi account uye, kana zvichidikanwa, shandisa su. Izvi zvinoitwa nekuti zvikanganiso zvingaitwe mune zvakajairwa kana mushandisirwo mashandisirwo epc anozogadzirika munzvimbo yakajairika yevashandisi uye kwete padanho rehurongwa hwese, handiti?
Uye ikozvino zvandinofunga nezvazvo ... gomba rekuchengetedza kana kwete ... mushure mezvose, vashandisi pane ese mashandiro masisitimu anobatwa nenzira dzakafanana chaizvo. Mutungamiri kana mudzi muGNU / Linux ane masimba makuru, zvine chekuita neWindows, mune vanozove ivo vanoita mabasa ekutungamira uye nekuchinja shanduko. Kubva pane izvi zvinogona kuonekwa kuti kuvanzika uye kuomarara kwepassword password kwakanyanya kukosha, uko, kana kukanyengerwa kana kuwanikwa, kungakanganisa kugadzikana (Ndataura kugadzikana uye kwete kuchengetedzeka, izvo zvainge zvatotyorwa kana mudzi password wawanikwa) yeiyo system yese.
Mukupedzisa, ini ndasara nezvakataurwa pachiitiko chekare: tichava nemasisitimu akasimba kana michina sekureba sevashandisi uye kunyanya vatariri vane basa, zvikasadaro ... zvakapusa, kwete.
Kwaziwai mudikani, ndakamirira maonero enyu :)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Vashandisi veGNU / Linux: Mutemo Wakagadzirwa, Cheat Yakagadzirwa!
mukuti ndiyo poindi ye linux, nekuti munhu X anogona kusvika uye kunyangwe akawana password yemushandisi wenguva dzose, zvinomutorera zai kuti afumure mudzi wacho!
asi mumawindows iwe unowana iyo password yemutungamiri (iyo isiri yakaoma kudaro) uye boom! iwe unogona ikozvino kusunungura mapurogiramu !! XD
kwaziso !! uye chinyorwa chakanaka! ;)
Ini ndinofunga, sekutaura kwa osuka, kutsvaga mudzi mumwe kunotora nguva.
Asi huya, chimwe chinhu chandaida uye ini ndinotora kubva kune iyo posvo: «... tichava nemasisitimu akasimba kana michina sekureba sevashandisi uye kunyanya vatariri vane basa ...» izvi kwandiri ndizvo zvinoita kuti ubudirire yekuchengeteka. Ini ndanga ndisiri mushandisi wakananga weWindows kwemakore (yakanangana mushandisi nekuti ini handina iyo yakaisirwa pamba, ndinongoishandisa kuYunivhesiti kune mamwe mapurogiramu akabhadharwa anoshandiswa ipapo), asi pazvakange zviripo, mashoma nguva huh aive nezvinetso nemavhairasi nevamwe. Nekudaro, ini ndinofunga kiyi iri mukudzidziswa kwevashandisi uye pamusoro pezvose, kune avo vanoshanda kuisa mashandisiro uye zvishandiso zvemakambani / mabhangi / madhipatimendi ehurumende. Sezvo kukundikana kwevanhu kunogona kuburitsa kutadza kwemakomputa. Ndiri kureva, zvishoma zvishoma, saka tmb inofanirwa kuona kana iyo system yakanaka kana kwete, asi iri imwe nyaya, kana mushandisi achikwanisa kuve akapusa, inofanira kunge yakaoma (isingagoneke) kupfuura zvakajairwa, kupinda system.
Basa rakanakisa nechinyorwa N @ ty.
Ini ndinoshamisika: Ko mushandisi weLinux anopinda mukati semudzi seanotambura semushandisi we windows? nekumashure
Is Windows mushandisi kupinda mukati seyakaganhurirwa zvakachengeteka semushandisi weLinux?
Aaa ... ndinoturikira zvaakataura? ... handinzwisiseoo ... usave elitist !!!
@ Ndinokutendai mose nekuda kwemashoko, mushure mezvose zvaive zvakafanana ... zvakanyanya kuchengetedzeka, ichokwadi, asi zvakafanana….
YAKO kupinda ndeye SUPER inonakidza ...
Izvo zvine musoro kuti Linux yakachengeteka zvakanyanya, nekuda kwekuchengetedza kwayo algorithms uye nekuda kweMabatiro aMubati. Izvi zvinodzivirira chero mushandisi kubva mukukuvadza system yedu, uyezve inotidzivirira kubva mukukanganisa kwakaipa kwezvirongwa zvakaipa, kana inozivikanwa zvakare sevirusi ...
Izvo zvine musoro kuti zvirizvo, zvekuti kazhinji handinzwisise kuti chengetedzo iri nyore sei muWindows.
sudo rm esty = Ndiri shamwari yamwari uye ndinodzima esty
bvisa esty ???… haha… iwe uchaona, ini ndawana chimwe chinhu chinonakidza kuwana kunyangwe kwemusi weMugovera : D
@esty: rm yakafanana neiyo DOS Delete rairo, ndokuti, inobvisa chimwe chinhu. Mune ino kesi, bvisa esty
Iwo wekuraira "sudo rm -rf /" unodzokorodza zvinyowani maforodha pasina kubvunza (ye-- rf) zviri mukati / (rinova dhairekitori remidzi, iro rine midhiya yese yakabatana nekombuta, kusanganisira, asi isina kuganhurirwa kune zvese zvakaoma madhiraivha, peni zvinotyaira, vanoverenga ndangariro, nezvimwe
Saka kana zvikaitika kwauri kuti uchinjire kune linux uye troll inokuudza kuti uise izvozvo, usazviite;)
@esty: Ichi chiziviso chehondo!